Dalalka Carabta oo ku baaqay in Soomaaliya la taageero . | Salaan Media
Home Wararka Dalalka Carabta oo ku baaqay in Soomaaliya la taageero .
Warmurtiyeed laga soo saaray shir madaxeedka dalalka carabta uga socday magaalad Doxa ee dalka Qadar kaas oo ay ka qeyb galayeen madaxweynayaal , boqoro iyo amiiro ka mida dalalka Carabta ayaa laga soo saaray in Soomaaliya laga taageero dhinacyo fara badan.
War murtiyed kaas ayaa lagu taageeray sidoo kale Nabadda ay Ciidamada AMISOM ka dhaliyeen dalka Somaliya sida lagu qoray ,waxaana ay Jaamacadda Carabta ugu baaqday beesha Caalamka in lataageero dowladda Somaliya oo hadda ah dowladda ka baxday KMG nimo.
Waxaa Sidoo kale lagu muujiyay in ay taageero xooggan ay Jaamacadda Carabta u heyso dowladda Somaliya oo kamid ah Ururka Jaamacadda Carabta , iyadoona uu Shirkaas goob jog ka ahaa Madaxweynaha Somaliya oo halkaas khudbad u kaga hadlaayo xaaladda Somaliya halkaas ka jeediyay.
Sidoo kale Shirkaas ayaa waxaa looga hadlayay xaaladaha Wadamada Siiriya iyo Falastin oo iyagana kamid ah dowladaha Islaamka oo dhibaatada ay hadda ka jirto.